Burma Partnership » မြန်မာအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများသည် တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရမှု၏ အခြေခံ အကြောင်းတရားများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်
“လူမသိသူမသိဘဝများ – မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမသိသေးသော နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်ရမှုသံသရာ” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာမှ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် နေထိုင်နေကြသော မွန်တိုင်းရင်းသားတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရခြင်း အခြေအနေအကြောင်းရင်းများအား အလေးပေးဖော်ပြထားပြီး မကြာသေးမီကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်းတို့နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းရမှု၏ အကြောင်းရင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြထားသည်။
“စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတို့ရဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ရေးမူဝါဒတွေကို မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေအပေါ် ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး လက်နက်ကိုင် စစ်ဆင်နေတာတွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်း တစ်လျှောက်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ နေရပ်စွန့် ရွှေ့ပြောင်းရတာတွေ၊ အပယ်ခံရတာတွေ မနည်းမနော ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်” ဟု မွန်ပြည် လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ် ဒါရိုက်တာ နိုင်အဲမွန်ကပြောသည်။ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး ရေရှည်နေရပ်စွန့်ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသူတွေ ဇာတိနေရပ်ကို ပြန်ကြတဲ့အခါ ဒုတိယအကြိမ် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတာတွေ ထပ်မကြုံကြရစေဖို့ အာမခံနိုင်ရပါမယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက စစ်ပွဲနဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်ရမှုတို့ရဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကို သေချာပေါက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“လူမသိသူမသိဘဝများ” အစီရင်ခံစာတွင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခံရကာ ဒုက္ခသည် အဖြစ်မှ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူများ (IDP များ) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရသော မွန် ဒုက္ခသည်များ၏ အတွေ့အကြုံအား ပြန်ပြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူများအား ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်အဆင့်တိုင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအနေဖြင့် အတိတ်သင်္ခန်းစာများအား ပြန်လည်သုံးသပ် ဆင်ခြင်နိုင်စေရေးအတွက် ဤအစီရင်ခံစာက မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ နောက်ထပ်လုပ်ဖို့ အခုလို NLD က ဦးဆောင်တဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ မိုးထဲလေထဲ လက်တွဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို နှိမ်ချဘေးဖယ်ခြင်းမခံရဘဲ အားပေးဖို့၊ လှုံ့ဆော်ပေးဖို့၊ အာမခံပေးဖို့ အားလုံးကလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာကဆိုသည်။ “IDP နဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရေရှည်ခံတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ ရနိုင်ဖို့ဆိုရင် နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်အားလုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ IDP တွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုတွေ ပါဝင်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်တွေ သေချာပေါက် အာမခံပေးရပါမယ်” ဟု သူမက ဆက်ပြောသည်။
“အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာ အတိတ်ကာလက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသူတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးရပါမယ်” ဟု ဘားမားလင့်ခ်အဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာတာဝန်ခံလည်းဖြစ်၊ တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်သော လီနာဇီဂျာက ပြောသည်။ “နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအလှူရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေက စီမံကိန်းတွေ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ခံမှုရှိဖို့၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဖို့ အာမခံရပါမယ်။ ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ စစ်ပွဲနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရမှုရဲ့ အခြေခံ အကြောင်း တရားတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေရဲ့ တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေး မျှော်လင့်ချက်တွေကို အခြေခံအားဖြင့် ထောက်ခံ အားပေးဖို့ လိုပါမယ်။” ဟု သူမက ဆက်ပြောပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် –
ခင်ဥမ္မာ – တာဝန်ခံ၊ မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၊ +၆၆ (၀)၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂
နိုင်အဲမွန် – လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၊ မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း၊ +၉၅ (၀)၉၇၇ ၆၂၂ ၈၀၄၀ auemon@gmail.com (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်/မွန်)
လီနာဇီဂျာ – နိုင်ငံတကာတာဝန်ခံ၊ ဘားမားလင့်ခ်၊ +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉ ၅၆၅၂ leena@burmalink.org (အင်္ဂလိပ်)
“The discriminatory policies of the successive military regimes and the previous Thein Sein-led Government, coupled with decades of armed conflicts waged against ethnic minority communities by the Burma Army have led toadevastating number of displaced and disenfranchised ethnic minorities along the southeast Burma,” said NaiAue Mon, Program Director, Human Rights Foundation of Monland. “The new government led by the National League for Democracy (NLD) must work to guarantee that those who have survived decades of protracted displacement will not face secondary displacement upon their return to their origin by ensuring that political and economic reforms address the root causes of conflict and displacement,” he continued.
KhinOhmar; Coordinator, Burma Partnership; +66 (0)81 8840 772, (English/Burmese) khinohmar@burmapartnership.org
NaiAue Mon; Program Director, Human Rights Foundation of Monland; +95 (0)977 622 8040, auemon@gmail.com (Burmese/English/Mon)
Burma Link advocates for Burma’s ethnic nationalities and displaced people, and shares their voices and stories locally and internationally.
Burma Partnership isanetwork of organizations throughout the Asia-Pacific region supporting the collective efforts of all peoples working towards democracy, peace and human rights in Burma.
Tags: 21st Century Panglong Conference, Burma Link, Burma Partnership, Human Rights Foundation of Monland, Humanitarian Aid, IDPs and Refugees, Kachin State, Karen State, Mon State, National League for Democracy, Nationwide Ceasefire Agreement, Shan State